ရင်ကိုလာထိသော ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် ~ Myanmar Express
From : ဒေါက်တာဆိပ်ဖွားဒီနေ့ ILO ကွန်ဖရင့်စ်ကို အချိန်ပေးပြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ၊ တဆက်တည်းဆိုသလိုပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ် ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဆိုတာ လက်ခံပါသလားဆိုပြီး သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကမေးတယ် ၊နောက် တစ်ယောက်ကျော်မှာပဲ နောက်သတင်းထောက်တစ်ယောက်က ခုနမေးခွန်းကိုပဲ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုသဘောထားပါသလည်း လို့ထပ်မေးပြန်တယ် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မေးခွန်း ၂ခုလုံးကို Rule of Law အတိုင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။ ပါးနပ်တဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြေမျိုးပါပဲ ကောင်းပါတယ် ၊ ရင်ထဲကိုတော့လာမထိပါဘူး ။နောက် ၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်နဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်အမေးအဖြေတွေကြည့်လိုက်ပါတယ် ၊ အစိုးရရဲ့ ပြောနေကျစကားတွေအတိုင်းပဲ ၀န်ကြီးက ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဖြေသွားပါတယ် ၊ ၀န်ကြီးရဲ့အဖြေတွေလည်း ကောင်းတာပါဘဲ ၊ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲကိုတော့လာမထိပါဘူး ။ကျွန်ုပ်ရင်ကိုလာထိသော အဖြေများကို ဖြေကြားခဲ့ ပြောဆိုခဲ့သူမှာ ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုံက အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားတွေကို ကိုယ်စားပြုတက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်ဖြစ်ပါသည် ၊ သူမ ပြောဆိုခဲ့သောစကားများသည် ကျွန်ုပ်၏ ရင်ကိုလာပြီးထိပါသည် ၊ ကျွန်ုပ်ပြောချင်သောစကားများနှင့် ထပ်တူဖြစ်ပါသည် ၊ သူမသည် ဆန်ရှင်ကြောင့် မြန်မာအလုပ်ရှင် အလုပ်သမားတို့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဈေးကွက်မရှိ ၊ ရွေးချယ်စရာမရှိ ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးမရပဲ ဖြစ်နေပုံတို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်သည့်စကားလုံးများ ပြောနေသော်လည်း မျက်နှာသည်အပြုံးမပျက် ၊ အပြုံးမပျက်ဟုဆိုသော်လည်း သူမ၏မျက်နှာနှင့် မျက်လုံးတို့တွင် ခံစားချက် ၊ ခံပြင်းမှုတို့ အထင်းသားပေါ်၏ မျိုးချစ်စိတ် ပေါ်လှ၏ ၊ တော်လှ၏ သူသာသရုပ်ဆောင်လုပ်ပါမူ ယနေ့သရုပ်ဆောင်များ ထမင်းငတ်ဖွယ်ဖြစ်၏ နိုင်ငံအတွက် တာဝန်ကျေလှ၏ ၊ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ သတ္တိကို မြင်ရ၏ ၊ ရဲရင့်မှုကိုတွေ့ရ၏၊ အသိအမှတ်မပြုပဲမနေနိုင်အောင် ဖြစ်ရ၏ ၊ ဤကဲ့သို့ စိတ်ထားရှိသောမြန်မာအမျိုးသမီးမျိုး တိုင်းပြည်တွင် များများလို၏ ။ Myanmar Express
17 June 2012 02:26
Here is the answer what you want Dr Seitphwa.To answer the questions, one has to know the right history and conditions of what people asked. In this case Daw Khine Khine Nwe seems to know the genuine problems of the workers of our own country. Obviously Daw Su never been to Maung taw and Buu thii taung and so her answer was justacheap loitering words.
3 July 2012 15:53
ပြည်သူ့အကျိုးလိုလားသူနှင့် မလိုလားသူတို့ရဲ့ အဖြေများ ရင်ကိုထိမှန်တာချင်း မတူညီနိုင်ပါ။
[image: Photo: တောင်ကိုရီးယား အခြေစိုက် KIA ကားကုမ္ပဏီ၏ တရားဝင် ကားအရောင်းပြခန်း မေ ၁၉ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ် မေလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၃ တောင်ကိုရီးယား အခြေစိုက် KIA ကားကုမ...
ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် Family fun fair ၏ ကလေး ပုံဆွဲပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၃ ကျင်းပ
Family fun fair the 2nd children Drawing contest (ကျောင်းပေါင်းစုံ ပုံဆွဲပြိုင်ပွဲ)ကို
၅ နှစ် သမီးကို အမှိုက်ပုံးထဲက အစားအစာ များအား စားခိုင်းသည့် ဆရာမအား အရေးယူခိုင်း
ဆရာမတစ်ဦးက ၅ နှစ်သမီးလေးကို အမှိုက်ပုံးထဲရှိ အစားအစာများ ကောက်စားခိုင်း သည့် ဖြစ်ရပ်တ စ်ခု ဖြစ် ပွား ခဲ့သည်။မူကြိုကျောင်းမှအိမ်သို့ပြန်လာသော သမီးဖြစ်...